Toetran'ny olona sy toetra mampiavaka ny zaza tigra sinoa | Zodiac sinoa ho an'ny ankizy - Famantarana Zodiac
Taonan'ny tigra ho an'ny ankizy: ny toetran'ny zaza tigra Zodiac tigra, ny toetrany ary ny toetrany
Taonan'ny tigra ho an'ny ankizy:
Ny toetran'ny zaza tigra Zodiac Tiger, ny toetrany ary ny toetrany
Ny taonan'ny biby sinoa an'ny tigra dia mipoitra miaraka amin'ny tanjaka isan-karazany. Voalohany, maneho ny toe-tsain'olombelona sy ideolojia izy ireo. Etsy ankilany, mety ho maimaika koa izy ireo. Io mavitrika amin'ny tanora Tiger io dia mifehy tena, ka amin'ny farany dia tsy mandeha intsony ny raharaha.
Ara-batana ny zaza tigra dia salama, mavitrika ary tia fanatanjahan-tena. Mahalana izy ireo no mahazo sery sy aretina kely hafa. Ny tiger dia manana tanjaka iray taonina, ary indraindray io zaza io dia mivoaka anaty rano. Hanosika ny fetra ara-batana izy ireo. Ampianaro ny fahaizanao miharo ny fahatanoran'ny tigra sinoa sy ny fomba hiarovany tena amin'ny hetsika tsotra toy ny famelarana na fampiasana fitaovam-piarovana mety amin'ny hetsika ara-panatanjahantena.
Ny zaza tigra dia 'tantely mpiasa' tsara. Tian'izy ireo tokoa ny manao raharaha. Ny famantarana biby japoney an'ny tigra dia fanahy mahaleo tena mahery vaika, izay miezaka manao zavatra tsy takatry ny sain'izy ireo (ara-bakiteny sy ara-panoharana). Ny fandehanana amin'ny vovoka io vazy mahafinaritra eo amin'ny akanjo io dia mety hifarana amin'ny fianjerana mafy.
Ny ray aman-drenin'ny Tigra dia tsy maintsy mahatakatra fa ny zanakao dia tsy ho be vava loatra. Tsy dia matoky tena loatra izy ireo ary mijanona ho kely fahatokisana. Midika izany fa manaporofo fa sarotra ny fiaraha-monina, indrindra rehefa manomboka mianatra. Ny zanaka tigra dia miafara amin'ny olom-pantatra maro amin'ny farany, saingy tsy dia fisakaizana maharitra. Manàna faharetana ary omeo torolàlana malefaka rehefa hitany ny toerana misy azy ireo isaky ny boriboriny alehany.
Ao anatin'ny fianakaviana, ny Taona Sinoa an'ny tigra dia miseho amin'ny ankizy mampiseho ny fitiavany amin'ny fomba miavaka. Ity zaza ity dia te-hiara-dia aminao, ary izany dia mitaky fotoana fatorana tsara. Ny namana tsara indrindra ho an'ny tigra dia ireo zaza teraka tamin'ny taona soavaly, alika ary kisoa.
vehivavy capricorn sy taurus lehilahy eo am-pandriana
Tiger tigers snuggling rehefa azonao atao ny mametraka azy ireo hipetraka mandritra ny roa minitra. Raha tsy izany dia mivoaka sy mandehandeha izy ireo, toa mihetsika maharitra. Ho an'ny zaza teraka tigra, ny fahafinaretana no anaran'ilay lalao (izay mety hiteraka korontana ihany koa). Ny tigra dia tsy 'ratsy' fanahy iniana velively. Fa tsy ny fahatongavan'izy ireo dia mivoaka tsy tapaka araka ny kasaina.
Na eo aza ny fenitra tsy fantatra, rehefa manapa-kevitra ny hiresaka ilay Tiger Animal Tiger, dia mirotsaka an-tsehatra tanteraka izy ireo ary tia karismatika. Ny fomba azo antoka hisamborana ny Tigra dia amin'ny alàlan'ny fanontanianao momba ny nofy, fanantenana ary hevitra noforonina. Ny tigra dia mpino zavatra iray izay, toa ny saka rehetra, dia mahavita miantsidina amin'ny tongony somary tsy voa na inona na inona.
Ny zaza tigra dia tena maniry toerana ao an-trano izay anakanany malalaka. Midika izany fa mahazo famoronana bebe kokoa amin'ny famolavolana ny Tigra ho an'izany angovo izany. Kilalao tsara ho an'ny Tigra (ivelany) dia pogo sticky na trampolinina. Raha misy Chines Zodiac Sign tena natao hamoaka azy dia tigra! Ary noho ny fahaizany manaitra, dia mahalana izy ireo no voadona sy mangana na dia avy amin'ny hetsika 'andrana' aza. Hisy fotoana iray mihoatra ny ain'ny ray aman-drenin'ny Tiger rehefa alaim-panahy hanakimpy ny masony fotsiny izy ireo ary manantena ny tsara indrindra. Ny tampon'ity toetra mampahasahy ity dia i Tiger mahazo fifaliana lehibe amin'ny fanandramana ireo adala rehetra ireo. Ny tigra dia mankafy fihomehezana tsara foana, na dia amin'ny tenany ihany aza.
Hitan'ny ray aman-dreny fa mpikomy miaraka amin'ny antony ny tanora tigra. Izy ireo dia mpanapa-kevitra tsy mahasosotra, tsy afa-mihetsika, ary haingana ary manidina amin'ny sisiny. Tiger dia manana hevitra momba ny zava-drehetra ary maneho tsy misy tahotra izany hevitra izany ho zava-misy. Amin'ny lafiny sasany, ireo teraka tamin'ny Taona Sinoa an'ny tigra dia saika mafy loha toa an'i Bull, saingy izany dia satria i Tiger dia mampiasa hevitra sy fiainana amin'ny valiny feno.
Ny zaza tigra dia antsasaky ny ego sy antsasaky ny fony. Tian'izy ireo ny manome fanampiana ny olona indrindra amin'ny 'fikatsahana' izay mahasarika ny fahalianany. Ity zaza ity dia mandray ilay zanany mandehandeha, noana ary marary mba ho mpiaro ny trano. Ny fanahy tigra amin'ny finoana Farany Atsinanana dia mandroaka matoatoa ary miaro ny trano amin'ny fandrahonana hafa, toy ny afo. Ka ny fiadiana ny ho tompon-daka amin'ny ankohonana dia toa tsy misy toa izany.
Humor dia iray amin'ireo fanomezana tsara indrindra sy fomba fiasa amin'ny Tigra. Rehefa tsy mihomehy intsony ny tigra dia fantatrao fa misy zavatra tsy mety. Ny zaza teraka tamin'ny taom-biby an'ny tigra dia manana fo lehibe izay maratra rehefa tsy tian'ny olona ny fihetsika tsara fanahy. Mirehareha amin'ny maha-tena namana azy ny tigra, ka tena mandratra tokoa ny tsy fivadihana. Fanomezana iray hafa avy amin'ny Tiger dia fifaliana madio amin'ny fiainana. Ny traikefa sy ny fahitana vaovao rehetra dia lasa antony fankalazana.
Raha ny fahitana azy amin'ny fanabeazana dia manana eritreritra gaga sy be fahalianana i Tiger. Miaraka amin'ny mpampianatra marina mitazona ny fahalianan'ny Tigra dia hitombo tsara izy ireo. Raha tsy misy izany firotsahana izany dia mivezivezy any amin'ny tany nofinofy mahafinaritra ny sain'ny tanora Tigra. Hanjary tsy hatahotra izy ireo ary mety hanakorontana.
maninona ny aries no manintona pisces
Raha miresaka ray aman-dreny dia misy kileman-toetra roa ao amin'ny zanakao teraka Tiger izay mila fitandremana. Voalohany, maimaika izy ireo. Ny eritreritra dia nivadika hetsika nefa tsy nandrefy ny vokatra rehetra mety hitranga. Ao amin'ny dichotomy hafahafa dia mampiseho famantarana ny tsy fahazoana antoka ihany koa ny Tigra. Noho izany dia tratra eo anelanelan'ny zaza mihazakazaka ianao, ary ilay manambara ny tenany ho tsy miasa.
Rehefa hitanao fa malahelo na matahotra ny Tiger sinoa anao dia mitodiha amin'ny sainao. Tsy izao no fotoana hanaovana fampianarana na lesona momba ny fiainana. Manolora fiaraha-miory sy teny manohana. Azonao vakina indray ny olana aorian'io rehefa milamina ny sain'i Tiger.
Mandritra ny taona fahatanoran-jaza dia mety ho lasa mahery setra ny zaza teraka amin'ny taona Zodiac sinoa an'ny tigra. Zava-dehibe tokoa ny fametrahana ny filaminan'ny pecking ny fianakavianao alohan'ny hitrangan'izany. Raha tsy izany dia maneho fahatezerana sy fahasosorana amin'ny fampisehoana mibontsina tsy misy mahaliana olona i Tiger. Ry ray aman-dreny, tadiavo ireo famantarana fa tonga eo amin'ny toerana mangotraka ny tigra ary miezaha hampitony ny rano amin'ny alàlan'ny marimaritra iraisana mba hahitana vokatra tsara indrindra.
Zaza tigra Zodiaka sinoa - zazavavy
Tovovavy teraka tamin'ny Taom-biby Shinoa an'ny tigra tia ny fahaleovan-tenany. Izy ireo dia tsara fanahy, matanjaka ary manao mpitarika voajanahary amin'ireo mpiara-mianatra aminy. Ny tovovavy tigra dia misarika ny sain'ireo olona hitany fa mahaliana ary indraindray dia sarotra ny mitazona zavatra mahaliana. Ny toetrany andriamby dia manintona ny olona ihany, ary ny Tiger dia iray amin'ireo famantarana Zodiaka Sinoa vitsivitsy izay toa mifanaraka amin'ny 11 hafa miaraka amin'ny ezaka kely.
Ny tovovavy tigra dia manana fihetseham-po mahery vaika sy filana, indrindra rehefa feno taona izy ireo. Misy fiantraikany mivantana amin'ny filan'izy ireo fahalalahana izany. Ny fifandraisan'ny zaza tigra rehetra dia manana 'efitrano bobo' ahafahany mandamina ny fihetsem-pony.
Ireo mpianatra ao amin'ny Zodiaka Sinoa dia milaza amintsika fa ilay Tigra vavy dia manana izay mety hoheverin'ny sasany fa toetran'ny lehilahy. Tsy kivy izy (Mitandrema ny ray aman-dreny), manohitra, manosika tena ary herin'ny natiora mahavariana raha vao mametraka ny sainy amin'ny zavatra iray izy. Tsy hijoro ao ambadiky ny olon-kafa mihitsy ity zazavavy ity ho fiarovana. Ny fiainany dia fiainana iainan'ny herimpo sy hafanam-po. Na inona na inona taonany, ity zaza teraka tigra ity dia mitondra ny fiainany mankany amin'ny lahatra. Ireo izay manakana ny lalana dia mety ho resy. Ny ezaka antsasaky ny fo dia tsy ao amin'ny boatin'ity fitaovana ity. Ny hakamoana dia pox izay tsy ampiasainy mihitsy. Izany rehetra izany dia mamela ny ray aman-dreny Tigra handray fofonaina lalina, manadio be, mahafantatra tsara fa miatrika tolona isaky ny mametraka fitsipika sy fananganana hafa ankoatry ny fiheveran'ny Tigra azy indrindra.
Tahaka ny maro teraka tamin'ny Taona Zodiaka Sinoa an'ny tigra ny zanakao vavy dia mahatsapa lalina ny fitoviana. Na aiza na aiza no misy zavatra toa tsy mandanjalanja dia hiezaka ny hiditra an-tsehatra izy. Indraindray izany dia mahatonga azy ho lasa vatam-paty, saingy sarotra ny tezitra rehefa miady ho an'ny underdog izy.
Ny ankizy tigra no farany tsy mpanohitra. Izy ireo dia hanao ba kiraro tsy mifanaraka, ary hampivelatra ny fomba izay mety hiova rehefa tonga ny fihetseham-po. Indraindray ny tigra dia lasa matotra loatra ary mitsikera raha toa ka manosika azy mankany amin'ny 'norme' ny olona. Variana amin'ny fahombiazana izy ary matetika mitsara ny vidin'ny tena amin'izany fepetra izany. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia manana faniriana lehibe ho an'ny tenany izy. Rehefa tsy miseho ny tanjona dia mila rivotra be dia be avy amin'ny rambon'ny Tigra. Ho an'ny tovovavy tigra sinoa dia sarotra ny mitelina fa tsy afaka mandresy amin'ny fotoana rehetra. Ny fanambin'ny ray aman-dreny dia ny fampianarana ny Tigra ny kanto tsy fahombiazana am-pitiavana.
Ara-moraly, ny zazavavy teraka tamin'ny Taona an'ny tigra dia etika sy mahitsy. Raha manome toky izy, dia mila ny lanitra sy ny helo handrava azy. Tsy manam-paharetana amin'ny ankizy hafa heverina ho mamitaka izy. Ary lozan'ilay olona sahy manontany tena momba ny fitondran-tenany - amin'izay no mivoaka ny nify.
Toy ny Tigers rehetra, tia mianatra ity zazavavy ity. Tigra maro no mandeha amin'ny ambaratonga samihafa amin'ny fampianarana ambony noho ny hetahetan'ny fahalalana. Maranitra sy miovaova ny sainy. Azavao aminy indray mandeha ny zavatra iray, ary miditra ao anaty rakitra fisainana hampiasaina amin'ny ho avy izany.
vehivavy sy pisces lehilahy ara-nofo
Fahavoazana roa ho an'ny zanakao vavy teraka tamin'ny Taona Zodiaka Sinoa an'ny tigra dia ny avonavona sy ny tsy fandeferana. Ny fanantenana lehibe ananany ho an'ny tenany dia mitatra amin'ny olon-kafa. Olona tsy fahita firy afaka mahita io fahatsinjovana ambony io. Rehefa hitranga amin'ny tsy fahombiazana ny hafa, dia tsy hajaina intsony i Tiger ary mety miala lavitra an'io olom-pantatra io. Amin'izany, ny ray aman-dreny dia afaka mitarika ny Tigra amin'ny fahatakarana bebe kokoa ny hadisoan'ny olombelona, ​​ao anatin'izany ny tenany.
Zodiaka Zanaky ny Zodiaka Sinoa - Ankizilahy
Ilay zazalahy tigra dia mahery setra sy matanjaka toa ny rahavaviny ihany. Raha manan-janaka roa teraka Tiger ao amin'ny fianakaviana ianao, dia… miresaka momba ny tolona herinaratra. Boy Tiger no olona mety hampidi-doza (mitazona fiantohana ara-pitsaboana tsara, rey olona). Hafahafa ny ankamaroan'ny loza ateraky ny ady Tiger ho azy. Misy kitapo tsara vintana amin'ny taona am-paosin'ny Tigra izay manaraka azy mandritra ny fiainana. Indraindray izany dia mitarika ny tigra hanana fiheveran-tena mieboebo. Avereno haingana araka izay azo atao ireo ao. Ny fanetren-tena dia pilina sarotra atelin'ny zanakao tigra.
Ny ray aman-drenin'ilay zazalahy tigra dia mahita lafiny roa samy hafa amin'ny zanany. Ny zazalahy teraka tamin'ny taona sinoa tamin'ny tigra dia toa niaraka niaraka ary, sahy miteny azy isika, somary ara-dalàna. Ao anatiny kosa dia manana 'zazalahy ratsy' i Tiger izay mitaky fitakiana tsy ampoizina. Manampy izany ny volom-by sy ny ray aman-dreny tena nanapaka ny asany ho azy ireo. Ny fomba tsara indrindra hifehezana ny Tigra dia ny fanelingelenana azy ireo amin'ny lahasa izay tena karakarain'izy ireo. Izany dia mitarika ny Tigra indray avy amin'ny eritreritra egosentrika mankany amin'ny antony iray.
Tian'ny ankizilahy tigra ny eny ivelany. Rehefa ampy taona izy ireo dia te-hamakivaky ala, mananika hazo na hipetraka mandinika eo amoron'ny renirano mikitroka. Ity fotoana irery ity dia tena zava-dehibe amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe Tigra. Mamerina foibe misy metatra ary manatsara ny fifantohana. Ny ray aman-dreny dia tokony hanaja izany toerana izany ao anaty antony.
Anisan'ireo mpiara-mianatra aminy The Zodiac Animal Shinoa dia naminavina fa hiroso haingana amin'ny toeran'ny mpitarika i Tiger. Tian'izy ireo ny fanamby ary raha afaka mitondra olona vitsivitsy izy ireo handehandeha, dia mihatsara kokoa. Mampirisika ny hiasa mafy amin'ny hafa ny tigra, ary manantena izany avy aminy izany.
Ny olona teraka tamin'ny taona an'ny tigra dia manana karazana toetra dimy. Ny Wood Tiger dia boky misokatra feno fangorahana. Ny Tigra Afo dia sarotra ny mitantana mitovy amin'ny Votoatiny. Earth Tiger dia manana fomba fijery mitombina amin'ny fiainana sy ny finoana matanjaka. Gold Tiger dia nifanaraka tamin'ny hamafim-po. Water Tiger dia manana ego matanjaka sy mahay mianatra haingana be.
Daty: 1986, 1998, 2010, 2022…
Tiger Tiger (Yin)
Vato masina: Ruby, Safira
Nomery vintana: 1, 3, 4
Voninkazo: lisy mavo, Cineraria
Toro-lalana kardinaly: Atsinanana, Avaratra, atsimo
Loko: manga, volondavenona, volomboasary, fotsy
Andro tsara vintana: Sabotsy 16 sy 27 volana
taurus vehivavy sy pisces lehilahy tia fampifanarahana
nofy bibilava mandositra ahy
Gemini vehivavy sy taurus lehilahy mifanentana